२०७६ साउन २१ (August 6, 2019) मा प्रकाशित
नेपाल बायुसेवा निगमले लामो र नयाँ गन्तव्यमा उडान भर्न सरकारको जमानीमा २४ अर्ब ऋण लिएर २ वटा एयरबस खरिद गरेको थियो । निगमले एयरबस खरिद गरेपनि सोही अनुरुप उडाउन नसक्दा निगम अहिले घाटामा छ भने कर्जा लिएको कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानीकोषलाई किस्ता समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले पनि अहिलेकै अवस्थामा निगमलाई थप ऋण नदिने बताईसकेको छ । यसैबीचमा निगमले आफ्नो लामो र आकर्षक गन्तब्यको रुपमा जापान उडान भर्न अनुमति पाईसकेको छ । जापान उडानको लागि मिति तोकिएपनि २ पटकसम्म समय सर्दा हालसम्म अन्योलको अवस्थामा छ । केही समय अघि निगमले जापानको आफ्नो तत्कालिन प्रतिनिधि देबमान हिराचनलाई हटाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पुनः हिराचनकै नाममा अन्तरिम आदेश दिई उनैलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर निगमको यहि अगष्ट २९ मा हुने भनिएको जापान उडान तथा हाल भइरहेको तयारीको विषयमा निगमको जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र राङडोल लामाले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल वायुसेवा निगमको जापान प्रतिनिधिको रुपमा पहिला तपाईलाईं नियुक्ति गरेर पछि हटाइयो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । खासमा विवादको परिस्थिति किन निर्माण भएको थियो ?
मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने विवाद केही पनि होईन । नेपाल एयरलाइन्सले जापान उडान गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यो आधारमा हेर्ने हो भने कुनै विवाद छैन । तर निगम व्यवस्थापनबाट कसरी मलाई हटाईयो भन्ने विषय उहाँहरुलाई नै सोध्नुपर्छ । आजसम्म मेरो तर्फबाट भने कुनै विवाद छैन । निगम भनेको नेपाली जनताहरुको पैसाबाट चलेको संस्था हो । हामीले तिरेको कर पसिनाले खरिद गरेको जहाज हो त्यसको उडान गर्नुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ त्यसमा मेरो कुनै पनि विवाद छैन । मैले त निगमको जहाजलाई जापान उडान गर्न ११ बर्षदेखि प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आएको छु र अहिले पनि गर्दै छु ।
जहाज जापान उडान गर्न अनुमति ल्याउनु पर्यो भनेर निगम व्यवस्थापनले भनेपछि मैले जापान सरकारसँग हाम्रो फाईरिङ कम्पनीबाट आवेदन दिएर अनुमति लिएको हो । हामीले अप्रिलको ९ तारिखमा सबै कागजपत्र तयार गरेर बुझायौं र अप्रिल २५ मा अनुमति पाउन सफल भयौं । वास्तवमा त्यतिबेला जापान सरकारले नेपाली जहाजलाई जापान उडानको लागि विशेष स्वीकृति दिएको थियो । सामान्यतया अनुमति लिन ४५ दिन लाग्ने गरेकोमा हामीले १६ दिनमै पायौं । नेपाल एयरलाईन्सले पहिले उडान गरिसकेकोले अहिले पनि सहज रुपमा उडान अनुमति दियो ।
उदाहरणका लागि चीन, दुबईलगायत अन्य देशले अडिटको कुरा गर्दै अनुमति दिएको छैन तर जापान सरकारले त्यो अडिटको कुरा नगरी हामीलाई अनुमति दिएको छ । अन्य मुलुकले जस्तै जापान सरकारले पनि युरोपियन युनियनले राखेको कालो सुचीको कुरा गर्दै नेपाललाई जापान उडान नदिन पनि सक्थ्यो होला । तर उनीहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हामीलाई सहजै अनुमति दिए ।
जापानको उडान अनुमति ल्याउनुमा तपाई आफ्नो भूमिका दाबी गर्नुहुन्छ । निगमसँग सहकार्य नगरी त त्यो सम्भव भएन होला नि ?
मेरो जापान सरकार तथा त्यहाँका राजनीतिज्ञहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ । म धेरैलाई राम्रोसँग चिन्छु पनि म जापान बसेको पनि ४६ बर्ष भई सक्यो । जसले गर्दा मलाई त्यहाँको सरकारसँग लबिङ गरेर उडान अनुमति लिन सहज भयो । नेपाल एयरलाईन्सलाई जापान उडानका लािग मैले आफ्नो दायित्व बहन गरेको छु ।
तपाईं जापान बसेको भएपनि त्यहाँको आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने अधिकार त निगमकै हुन्छ नि ?
पहिले मलाई जापान उडानको लागि अनुमति लिएर आउनुस भन्ने अनि अनुमति ल्याएको भोलिपल्टै मलाई जापान प्रतिनिधिबाट हटाएर अरुलाई दिँदा यहाँ भित्र के खेल भइरहेको छ म आफैंले पनि बुझन सकेको छैन । मैले ११ बर्षदेखि निगमको तर्फबाट जापानमा प्रतिनिधि भएर काम गर्दै आएको छु । पहिला निगमको उडान आउने बेलामा पनि मैले नै पिएसए गरेको थिए । जापान सरकारबाट अनुमति ल्याएर सबै उडानको लागि व्यवस्था मैले गरे । निगमकै लागि भनेर अहोरात्र खटे । अब मैले निगमको लागि घाँटी मात्रै काटेर दिन बाँकी छ । निगम नेपालीहरुको सम्पत्ती हो यसलाई सबैले माया गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो काम गरे त्यहि अनसार दुःख पनि । यसलाई हामीले कसरी सफल गर्छ भनेर लागिपरेको छु । तर, निगम व्यवस्थापनले मलाई किन हटायो भन्ने बुझनलाई उहाँहरुलाईनै सोध्नु पर्ने हुन्छ ।
लामो समय एकै व्यक्ति प्रतिनिधि रहिरहँदा झन् बढी हाबी हुने सम्भावना पनि त हुन्छ ?
होईन, मोनोपोली हुनु पर्ने कारण नै छैन । यो ग्लास जस्तो छर्लङ्गै छ । हामीले अहिलेसम्म जापान उडान गर्न लागेको हो तर जिन्दगी भर मलाई नै चाहिन्छ भनेको होईन । मैले दुख गरेपछि निगम व्यवस्थापनले त्यसको मर्म बुझिदिनु पर्यो मात्रै भनेको हुँ । जिन्दगीभर नेपाल एयरलाईन्स चलाउँछु भनेर मेरो सोच पनि छैन । तर उडान त हुन दिनु पर्यो नि ? उडान नै नभई निकाले पछि तपाई आफैं सोच्नुहोस न मलाई पनि कस्तो होला । एउटा मात्रै उडान भए पनि उडान गर्न त दिनु पर्यो नि ।
उडान भर्ने बेलामा तपाई प्रतिनिधि होईन भनेर भनेपछि कति चित्त दुखाईको विषय होला मलाई पनि भएको त्यही हो । जापानमा बस्ने मेरा आफन्त साथीभाइहरुले भन्छन् तपाईलाई प्रतिनिधिबाट हटाउँदा हामीलाई धेरै चित्त दुख्यो भनेर । साथीभाईलाई त त्यति चोट परेको छ भने मलाई कस्तो हुन्छ होला । तपाईले हुर्कायो बढायो फलायो यहाँसम्म ल्यायो बल्ल फल खाने बेलामा हटायो । मैले मेरो स्वार्थको लागि गरेको होईन म निगममा नै बसेर सबै गर्छु भनेको पनि होईन । यसलाई संचानल गरौं, व्यवस्थित गरौं अनि त्यस पछि सोचे हुन्छ नि यो कुरा होईन र ? हतार हतार गरेर यो गर्नु पर्ने कारण किन ? तर मेरो एउटा मात्रै माग के छ भने निगमको जहाजलाई हामी सबैले सफल गरौं भन्ने त्यतिमात्रै चाहना हो ।
यसलाई राम्रो बनाउनु पर्यो किनभने भोली जापान उडान हुने भए पछि जापानी पर्यटक आउने हो । भ्रमण बर्ष २०२० भन्दैमा त्यतिकै कोही आउँदैन । नेपाल जापान सिधा उडान गरेर जापानीहरुलाई त हामीले विश्वास दिलाउनु पर्यो नि । हामीले नेपालीसँगसँगै बिदेशी (जापानी) पर्यटकलाई तार्गेट गर्नु पर्छ । जस्ले गर्दा नेपालको पर्यटनमा सहयोग पुग्ने छ । जापान यति गाह्रो देश हो तपाईहरुलाई पनि थाहा नै होला । एउटा लाईन मात्रै नभए पनि उनीहरुले एसेप्ट नगर्ने देश हो । तर पनि जापान सरकारले नेपाललाई तपाईहरु आउनुहोस भनेर जहाज उडान अनुमति दिएको छ । हामीसँग जहाज छ हामीसँग पाईलट छ, सबै व्यवस्थित छ किन उडान हुन सकेन भन्ने कुरा म आफैं पनि अचम्ममा परेको छु ।
अहिले पछिल्लो समय ओसाका उडानको लागि टिकट विक्रीलगायत प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको छ । यसमा तपाईंको संलग्नताको स्थिति के छ ?
सर्वोच्च अदालतबाट जुन निर्णय आएको छ त्यस विषयमा निगमले अहिलेसम्म मलाई कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । उहाँहरुले मलाई किन जानकारी नदिनु भएको हो थाहा भएन । रह्यो कुरा टिकटको । जापानमा टिकट बिक्रीका लागि सिस्टम समेत विकास भएको छैन । जापानमा टिकट बिक्री गर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन । अहिले पिएसपी भन्ने एक ठाउँबाट केही टिकटहरु बिक्री भएको भन्ने सुनेको छु तर जापानको ओसाका कार्यालयबाट कुनै पनि टिकट बिक्री भएको छैन । हालसम्म कति टिकट बिक्री भयो वा भएन त्यो त निगम हेड अफिसलाईनै जानकारी होला । अहिलेसम्म मेरो तर्फबाट कुनै पनि टिकट बिक्री भएको छैन । सम्मानित सर्बोच्च अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गरेपछि नेपाल एयरलाईन्सले हालसम्म मलाई बोलाएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि निगमले मसँग छलफल गर्नुपर्छ नि । तर अहिलेसम्म पनि सर्वोच्च अदालतबाट जुन निर्णय भएको छ त्यसको निगमबाट मलाई कुनै पनि जानकारी आएको छैन । म अहिले पनि निगमको जवाफको पर्खाइमै छु ।
तपाईंले भनेजस्तै अन्तरिम आदेशपछि पनि निगमले समन्वय नगरेको अवस्थामा जापान उडानमा कुनै प्रभाव त पर्दैन नि ?
त्यो कुरा नेपाल एयरलाईन्सलाई नै सोधनु पर्ने हुन्छ । उहाँहरुले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आईसके पछि तुरुन्तै मसँग सम्पर्क गरेर जहाज उडान गर्न के के गर्नु पर्छ तपाईले गर्दिनुपर्यो भनेर आउनु पर्ने हो । अहिलेसम्म केही पनि नआएकाले म पर्ख र हेरको अवस्थामा छु । तर पनि हामी आफ्नो तरिकाबाट अगाडी बढिरहेका छौं ।
जापान तर्फको तयारी कस्तो छ त ?
जापानको कुरा गर्ने हो भने कार्यालय स्थापनादेखि लिएर सबै तयारी भईसकेको छ । अहिले पनि कुन किसिमबाट अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा मलाई त्यति ज्ञान भएन । यस विषयमा हेड अफिलाई सोध्नुपर्छ । तर मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम म गरिरहेको छु । मैले सबैसँग सम्पर्क गरिरहेको छु । विमानस्थलमा के के गर्नुपर्छ त्यो तयारी पनि भईरहेको छ । तर अगष्टको २९ तारिखको जुन लक्ष्य छ, त्यस विषयमा म केही भन्न नसक्ने अवस्थामा छु । जब निगम व्यवस्थापनसँग मेरो कुरा हुन्छ त्यसपछि मात्रै मैले निर्णय गर्न सक्छु । हुन त २९ को लागि भनेर हामीले पहिले नै निर्णय गरिसकेको अवस्था हो । त्यो बेलामा मैले नै गएर फाईलिङ कम्पनी (जेक्याप)सँग गएर मिति तय गरेको हो । तर पनि अहिले विभिन्न किसिमको कुरा सुन्दा कसरी अगाडी गईरहेको छ त्यो हेड अफिससँग जानकारी लिदाँ राम्रो होला । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आईसकेपछि उहाँहरुले म सँग तुरुन्त सम्पर्क राखेर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने हो तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
यात्रुको हिसाबले ओसाका आकर्षक गन्तव्य हैन, निगमलाई सन्चालन खर्च पनि उठाउन समस्या पर्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
यो हल्ला गलत हो । किन गलत हो भने ओसाका भनेको जापानको मध्य विन्दु हो । जस्तो नारिता सहर भनेको टोकियोबाट एक घण्टा ट्रेन चढेर जानु पर्छ । नारिता भनेको चिवा भन्ने एउटा ठाउँ हो । तर त्यहाँ पुरै नेपालीहरु छन भन्छन । तर त्यो चिवा भन्ने ठाउँमा त्यती नेपालीहरु पनि छैन । मुख्य कुरा के हो भने जापानको मुख्य विन्दु कहाँ हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामी नेपाली मात्रै ओसार्ने होईन जापानी पर्यटक पनि ल्याउनु पर्यो । त्यसको लागि हामीले के सोच्नु पर्छ भने ओसाकामा हामीले फ्लाइट रिज्यूम गर्नुपर्यो भने पहिले हामीले ११ बर्ष अगाडी उडान गरिसकेको थियो । उडान आएको स्थानलाई अनुमति लिनलाई सजिलो हुन्छ । फेरी ओसाका भनेको मुख्य केन्द्र हो । जस्तो क्युस्युफोको जुन दक्षिण भेगबाट आउने हो उहाँहरु त्यहाँ आउनलाई धेरै सजिलो हुन्छ ।
ओसाकाको उडान सफल भए पछि नारिता जाने भन्ने हाम्रो सोच हो । नारिता हामी जान्न भन्न खोजेको होईन । तर मान्छेमा के भ्रम भयो भने नेपालीहरु त नारितामा छ । नेपालीहरु नारितामा मात्रै होईन सबै क्षेत्रमा छ । सञ्चालनको हिसाबले पनि ओसाका उपयुक्त गन्तव्य हो । नेपालबाट ओसाका र ओसाकाबाट ५ सय किलोमिटरको दुरीमा पर्छ नारिता सहर । उडानको हिसाबले खर्च त त्यहाँ बढी हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले नारिता जान ओसाका ५ सय किलोमिटरको दुरी पार गर्दै नारिता जानु पर्ने हुन्छ ।
नारिताको कुरा धेरै आएको छ । यो तपाईंकै पहलमा वा उडान सहजरुपमा लिन सकिने कारणले पहिले ओसाका उडान रोजेको हो ?
होईन ओसाका भनेको पहिले पनि उडान भईसकेको हुनाले । फेरी त्यो उडान आईसकेको भएकाले उडान अनुमति लिनलाई सजिलो भएकाले पनि हो । अब नारितामा उडान अनुमति लिनलाई समय लाग्ने भयो त्यही भएर ओसाका चाहिँ महत्वपूर्ण स्थान भयो नि । नारितामा सम्भावना हुँदाहुँदै हाम्रै पहलमा ओशाकामा उडान सुरु गर्ने भन्ने कुरा विल्कुलै गलत हो । हामी नारिता पनि जाने हो । तर किन भने हामीसँग कतिओटा जहाज छ र जम्मा २ ओटा मात्रै त हो । नारिता पनि उडान गर्ने र ओसाका पनि उडान गर्न सम्भव हुँदैन किन भने क्युस्युयो क्षेत्रको मान्छे दक्षिणको मान्छे नेपाल आउनु पर्यो भने एक दिन नारितामा बस्नु पर्ने हुन्छ । हामीले मान चित्रनै हेर्ने हो भने पनि ओसाका केन्द्र भागमा देख्न सकिन्छ ।
अब निगमले सेप्टेम्बर देखी नारितामा चार्टर उडान गर्ने भनेको छ । यसले ओसाका उडानलाई कतिको प्रभाव पर्छ ? के यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
अव यो विषय मलाई खासै जानकारी नभएकाले यसलाई निगमसँगनै बुझदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मैले बुझेको चार्टर भन्ने वित्तिकै महंगो हुन्छ । तर अरु कुरा मलाई थाहा भएन । तर विमान रिजर्भ गरेर उडाउनु पर्छ ।
ओसाका र नारितामा उडानको हिसाबले कुन राम्रो ?
ओसाका १०० प्रतिशत राम्रो हो । डेटा हेर्नुस तपाईले । एक दुई जना व्यक्तिसँग कुरा गर्ने हैन कि सबै डेटा लिने हो र हेर्ने भने ओसाका जस्तो राम्रो काहीँ पनि छैन । किनभने मलाई ढाँटेर कुनै स्वार्थ लुट्नु छैन । नेपाली जहाजलाई सफल बनाउनु छ । ओसाकाबाट मैले ८० प्रतिशत अकुपेन्सी भर्छु भनेर लेखेरै दिएको छु हाम्रो सम्झौतामै छ त्यो । त्योभन्दा बढी मैले के कमिटमेन्ट गर्ने आफैं भन्नुहोस । वास्तवमा नारिता र ओसाकाको ईस्यु होईन कि नारिता भनेको पछि जाने हो । ओसाका त पहिले पनि आइसकेको हुनाले अनमति लिन पनि सजिलो त्यहाँ व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ सेन्टरमा पर्छ । नारिता भनेको एउटा गाउँ हो । हानिदा भयो भने अर्कै थियो । नारिता भनेको धेरै टाढा हो ।
११ बर्षपछि जापान उडान गर्दा त्यो कति लामो समयसम्म टिक्छ जस्तो लाग्छ ?
अब निगममा नयाँ जहाजहरु आएको छ, त्यो हिसाबले टिकाउ हुनुपर्छ । अब व्यवस्थापनले यो निर्णय गर्नुपर्छ किनभने उहाँहरुले हामी निरन्तर उडान गर्छु भनेर हेड अफिसबाटै भयो भने यो सम्भव छ । हामीसँग ग्राहक छ, यात्रु छ, उडानको लागि व्यवस्थित छौं, सबै छ हामीसँग भने त्यसमा कुनै पनि रोक्नु पर्ने अवस्था छ जस्तो त लाग्दैन । बिचमा छोड्नु पर्ने कारण पनि छैन । पहिले हामी ११ बर्ष किन रोकेको भने एउटै मात्र कारण छ । हामीसँग ७५७ बोईङ मात्रै थियो । त्यसबाट साङ्घाई हुँदै ओसाका आउन पर्ने अवस्था थियो किनभने सिधा उडान गर्न सकिँदैन थियो बोईङले ।
तर अब त हामी सिधा उडान गर्न सक्ने जहाज हामीसँग यात्रु पनि राम्रै आउँछ । लागत पनि कम हुन आउँछ र आयश्रोत बढी हुन जान्छ । जसले गर्दा अहिले सजिलो छ पहिलेको जस्तो ट्रान्जिट भएर जानु पर्ने अवस्था छैन हाम्रो जहाज नपुगेर पनि हो हामीले निरन्तरता दिन नसकेको । घरी बिग्रने त कहिले के भए पछि निरन्तरता दिन नसकेको हो । त्यसको लागि कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन तर व्यवस्थापनले निरन्तर लैजान्छु भनेर निर्णय गर्न सक्नु पर्यो मैले निर्णय गर्ने कुरा भएन ।
भ्रमण बर्षको अवसर पारेर निगमले जापान उडान गर्न लागेको चर्चा भइरहँदा त्यहाँबाट पर्यटक नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था छ ?
एउटा चाहिँ के छ भने पहिले नेपाल एयरलाईन्स आउँछ भन्ने जुन हामीले प्रेस रिलिज गर्यौं, सबै जापानीले नेपाल मन पराउँछन्, उनीहरु नेपाल आउन आत्तुर छ । एक हिसावले पनि प्रचार प्रसार त त्यही भईसकेको छ । दोस्रो कुरा के छ भने २०२० मात्रै होईन यो अगष्ट देखिनै मान्छेहरु आउन सुरु गर्छ । जसले गर्दा २०२० मा त्यसलाई समग्रमा समायोजन गर्दै जान सकिने कुरा देखि रहेको छु । हामीले जुन लक्ष्य राखेका छौं, त्यो पुरा हुन्छ किनभने अहिले म जापानबाट नेपाल आउनु पर्यो भने १७ घण्टा लाग्छ मलाई । अहिलेसम्म सिधा उडान छैन हामी जापान देखी आउन होस या जापान नै जान किन नहोस हामी कि त हङकङ भएर आउनु जानु पर्छ कि त अर्को दोस्रो देश भएर आउ जाउ गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर निगमको जहाजबाट सिधा उडान मा आयो भने जापानबाट साढे ६ घण्टामा नेपाल आईपुग्छ । मान्छे त त्यसै बढ्छ नि बाहिरबाट घुमेर आउजाउ गर्नु नपरे पछि त्यसैले मैले के भन्न खोजेको हो भने जसरी हुन्छ हामीले यो उडानलाई सफल बनाउनु पर्छ । सबै एक जुट भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । एउटाले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्छ । जबसम्म एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन ।
विश्वभर कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो, इटली सबैभन्दा बढी प्रभावित
फागुन १९ देखि जापानको नारिता उडने भयो नेपाल वायुसेवा निगम, पहिलो उडानमा ५५ जना यात्रु
जापानमा नयाँ गाडीको बिक्रीमा कमी : टोयटा फाइदामा, निशान र होन्डालाई धक्का
जापानले १ हजार जना नर्सिङ केयर गिभर लैजाने, परिक्षा मिति तोकियो
श्वेतपत्रमार्फत जापानमा कामदार अभाव भएको घोषणा, नेपालीले पाउलान अबसर !
जापानको फुकुओकामा पुग्यो सिटी एक्स्प्रेस, जुलाईमा पैसा पठाउदा शुल्क नलाग्ने